Faiba glaasi ejegharị - China Wuqiang County Huili faiba glaasi
Faiba glaasi window ihuenyo
Mpịachi Window Screen
Self-nyagide faiba glaasi
Ịkwanyere mkpuchi faiba glaasi Yarn
Faiba glaasi chopped Strand ute
nche window ihuenyo
Anyị na-emejuputara àjà-enweghị atụ nso nke Direct ejegharị. The ejegharị awa anyị na-weaved site anyị deft pesonel, onye na-ahụ na nke a bụ na par na ụlọ ọrụ tọrọ ụkpụrụ. The nyere ejegharị dị na iche iche nkọwa. Tụkwasị na nke a, anyị kpọrọ ahịa nwere ike inweta a ejegharị si anyị dị iche iche nkọwa na ukwuu ọnụ ahịa.
Anyị n'usoro nke elu àgwà ngwaahịa na-agụnye nanị collection of Fiber ejegharị. The nyere ejegharị na-weaved site anyị ọkà ọkachamara iji kacha mma mma ihe anyị na-enwetara site n'ihe ndị kasị ikike mgbere nke ụlọ ọrụ. Ọzọkwa, ndị a na-e na par na ụlọ ọrụ quality norms na-mere dị iche iche nha na ezi uche kasị udu.
The ngwaahịa na-adabara nile di iche iche nke FRP ahu ihe. The-ahụkarị na ngwaahịa na-oche, mmiri tank, ụgbọala akụkụ, ụlọ ihe, ịdị ọcha wares, nchekwa tank na na. Onye ọ bụla kpọmkwem ejegharị mpịakọta ekpuchi site shrinkage akpụkpọ ahụ ma ọ bụ na-eru akpụkpọ ahụ, mgbe ahụ, enịm n'ime katọn igbe ma ọ bụ ka na pallet. Onye ọ bụla pallet ike tojupụtara 48 ma ọ bụ 64 na-apụta. Onye ọ bụla mpịakọta arọ bụ 15-18kg. Ọ na-ike na-amụba mpịakọta ibu dị ka ndị ahịa chọrọ. Pallet tojupụtara agaghi-elu karịa 2 n'ígwé, kaadiboodu igbe agaghi-elu karịa 5 n'ígwé.
Post oge: Apr-28-2018